Keith Packard anoda kuunza chaiwo kuLinux zvakare | Linux Vakapindwa muropa
Keith kurongedza yanga ichitaurirana neValve yegore rapfuura kuti ibatane virtual reality uye shanda pakugoverwa kwedu kweLinux. Uye isu takadzidza kuti nekuda kwekuratidzwa kweLinuxConfAu 2018 musangano waunogona kubvunza ku nzvimbo yepamutemo yechiitiko ichi. Sezvo isu tese tichiziva, Valve mushambadzi mukuru wevaraidzo yeLinux uye mienzaniso yakajeka ndiwo mavhidhiyo emitambo yemavhidhiyo eLinux, kuwedzera kune zvese zvave kuita munguva pfupi yapfuura muindasitiri yeiyo penguin chikuva, kubva kune yayo SteamOS distro kusvika iyo Steam Machine , nezvimwe zviitiko.
Vagadziri vakave nebasa rinorema rekuita chaiyo zvigadzirwa zvekuzvibata zvine hunhu pasi peLinux uye kwete kukonzera matambudziko neiyo giraidhi system. Uye saka izvozvi chokwadi chaicho chinogona kushanda chaizvo paLinux uye izvo zvichaita kuti vakawanda vanogadzira vafarire papuratifomu yezvavanenge vachiita mune ramangwana. Zvirokwazvo kana iwo mazita e mitambo yemavhidhiyo inoenderera ichikura paLinux Uye ikozvino aya akanaka nhau yeVR ajoina, isu tinogona kutaura kuti yedu distro ipuratifomu yakanaka yemitambo yemavhidhiyo uye chaiyo chaiyo yekushandisa uye ichave yakatonyanya kudaro.
Zvakanaka, kana usati uchiziva mushambadzi Keith Packard, ndinofanira kukuudza kana ndikakuudza mamwe emabasa ake chokwadi vacharira zvakawanda kwauri. Iye murwi kubva kuUnited States akashanda zvakanyanya pane graphical X Window server uye zvimwe zvinonakidza zvemahara software mapurojekiti. Mazhinji emapepa machena eX akanyorwa naKeith, pamusoro pekubatanidzwa neMIT X Consortium uye Xfree86, parizvino paX.org Foundation. Akatungamirawo Freedesktop.org uye akatora chikamu seDebian mugadziri kubvira 2004, achichengeta fontconfig nemamwe mapakeji.
Pamwe neiyi data Keith inoita kunge isingazivikanwe, ndoda kana ndikakuudza izvozvo akashanda pane vamwe mapurojekiti mazhinji akaita seCairo, X Window server yakawedzera seXRender, XFixes, XDamage, XComposite, XRandR, nezvimwe. Kune rimwe divi, zvakare zvine hukama nemapurojekiti akadai seKDrive, Xft, mutauro weNickle programming uye XDM, kwatinofanira kuwedzera iko kuedza kuunza VR kuLinux ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Keith Packard anoda kuunza chaiwo kuLinux zvakare
Dambudziko hombe pari zvino nderekuti: 1) hmd inodhura kana iwo akachipa ndeemahwindo chete. 2) Ngatiregei kutaura nezve vatyairi vasina kusimba uye vekunze kwekuita zvinoenderana neWindows, nokudaro zvichikonzera kusimudza izvo zvishoma zvinodiwa pane kuva 960 kana 970 unoenda ku980 unova mutsauko mukuru. 3) Unoshaya kana isina graphical interface kune vashandisi. 4) Ngatiregei kutaura nezve kushomeka kwemazita aripo ekuti kana vakatonyunyuta nezve zvishoma zvirimo muWindows ini handitombodi kufunga nezvazvo muLinux.
Heino nyaya yenyaya yangu yeCanonical Ubuntu pane kukudziridza zvisina basa kana mapfupi mapurojekiti ari kutambisa nguva nemari "Ini handidi kutaura nezve 4 kana mashanu mapurojekiti akakandwa mumarara Ubuntu muenzaniso." Panzvimbo pekuvandudza hmd kana yakanaka software kune bhizinesi, ingo kupa hmd paLinux seWindows.